Multifunctional bone drill - medical canulate drill - craniotomy drill - Medical reciprocating saw- medical oscillating saw wholesale manufacturer - wuhu Ruijin medica
RJ-PD Chiremba wemagetsi chibooreso
Hollow chibooreso / canulate chibooreso
Acetabulum Kupisa Drill
Micro bone chibooreso
Micro mhando Spine kuvhiya chibooreso
RJ-PS Chiremba yemagetsi saha
Electric plaster akaona
Sternum saw / inodzosera saw
RJ-MP Medical Electric akaona chibooreso
Electric akaona chibooreso maitiro
Micro saha chibooreso
Cranial chibooreso chigayo hurongwa
Wuhu Ruijin Medical Chishandiso & Midziyo Co, Ltd
leran zvimwe Taura nesu
e akateedzana orthopedic simba maturusi
s akateedzana orthopedic simba maturusi
Kukupa iwe nezvigadzirwa zvaunoda
Iyo ichangoburwa canulate chibooreso inonyanya kushandiswa kubata k waya, intraumedullary inopindira yekuvhiya kwembambo uye kuvhiya kweArthroscopic. Inogona kurwisa yakanyanya tembiricha uye yakakwira kumanikidza inosvika 135 centigrade. Kunze kwezvo, isu tinogona kupa akasiyana maficha senge AO, Stryker, Hudson etc.
SS-1011 Kudzora Saw
Iyo ichangobva kugadziridzwa S yakateedzana isina mabhuruku ekucheka bhonzo saha, inoumbwa neyakagadzika ruoko, charger, mabhatiri uye maona mashizha, anonyanya kushandiswa pakuvhiya kwehudyu & mabvi. Injini yayo inopinzwa inoita kuti basa riwedzere kushanda uye rakaringana; magadzirirwo ergonomic anoita akasununguka ruoko kunzwa; kukura kwebhatiri kunogona kuita simba rakasimba kugutsa zvinodiwa nevatengi.
Dzidza zvakawanda nezvekambani yedu
Bvisa nzwisiso yezvinyorwa zvebhizinesi
Inotungamira inogadzira zvigadzirwa zvemagetsi.
Ruijin ikambani yakabatana yesainzi, indasitiri uye kutengeserana, ichinyanya kupa mishonga yemagetsi saw & drill yezvigadzirwa zvemazino kubva kuchipatara plaster saw, yakajairwa pfupa chibooreso, inoshambadza saha, canulate chibooreso kune acetabular reamer drill, micro bone drill saw, sternum saw, cranial system uye multifunctional chibooreso yakaona nezvimwe, zvese izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mumhando dzekuvhiya.
Enterprise mukana wekuratidzira
Nyanzvi inogadzira, yakanakisa mhando, maawa makumi maviri neshanu basa pamhepo.
Makore gumi +
Pasi pekusaedza kukuru kwevashandi vese veRuijin, isu takawana kukura kukuru kunyangwe apfuura makore gumi nematatu.
Yedu Core Maitiro
Isu tinoomerera pane "Hunhu hunotsvaga kupona & manejimendi inotsvaga kusimudzira."
Tine kunoshamisa pamasikiro chikwata kutanga zvigadzirwa zvitsva.
Tine ENISO 1 3 4 8 5: 2 0 0 3 & CE0123 zvitupa zvakaburitswa neGerman TUV.
Tine advanced equipments kuona mhando & kugadzirwa.
Isu tinopa zvakakwana-mushure mekutengesa sevhisi kugadzirisa zvese zvinonetsa zvinotevera.
Ramba uchiziva nezvenhau dzeindasitiri
Masayendisiti anovandudza inova biomaterial iyo inowedzera bon ...
Masayendisiti akagadzira nyowani biomaterial iyo inobatsira mapfupa kupora nekukurumidza ...
Nuvasive Inotangisa Limb Kurebesa Plate Seimwe Inogona ...
NuVasive's Limb inorebesa Precice Plate / ...
Nzwisiso nyowani muzvirwere zvemapfupa
Kudzidza kunojekesa mabasa ejeni mumasero-ekuona-maseru mukukura kwepfupa; c ...
SS-3032 Sternum Vakaona
SS-3031 Kudzosera Saw
NS-3532 Sternum Yakaona
NS-3531 Kudzorera Saw
NS-3032 Sternum Yakaona
NS-3031 Kudzorera Saw
NS-2011 Lithium Bhatiri Inoshanda 360 ° Roating Mi ...
Pane Pane Zvigadzirwa Zvaunoda?
Zvinoenderana NeZvaunoda, Gadzirisa Yako, Uye Inokupa Nezvimwe Zvinokosha Zvigadzirwa.
Runhare: 0086 553 2672510/2672511
Kero: N0.33 wanchun mugwagwa, Wuhu, Anhui, China